Mune Actualidad iPhone isu tinotakura pamusoro pemakore 10 kuzivisa zuva nezuva nezvese zvine chekuita neApple, muchimiro chenhau, dzidziso, ongororo, ongororo, mashandisiro, chengetedzo uye zvakawanda zvikuru tisingakanganwe kutarisisa, izvo zvakatibvumidza isu kuva imwe yeanonyanya kuverengerwa anotaura chiSpanish mablog ane hukama neApple.
Iyo Actualidad iPhone timu yakaumbwa nechikwata che vaparidzi vane ruzivo rwakakura muzvigadzirwa zveApple. Muchokwadi, vazhinji vedu tinoramba takabata yedu yekutanga iPhone segoridhe pamucheka. Mune yedu blog iwe unogona kuwana mhinduro kune chero dambudziko, risinganzwisisike sezvarinogona kuita, kuburikidza neyedu dzidziso chikamu. Kana iwe usingakwanise kuiwana, unogona kubata mumwe wedu kuitira kuti pamwe chete, isu tigoedza kutsvaga mhinduro.
Iwe unogona zvakare kuwana yakazara kuongororwa, kuburikidza neyedu YouTube chiteshi, yezvose zvigadzirwa izvo Apple inotangisa pamusika pagore. Uye zvakare, isu tinoongororawo kuvhurwa kwetemu dzakakosha kwazvo mumakwikwi akanangana neApple, tichienzanisa uye tichiongorora poindi nepfungwa zvakanakira nekuipira ... pasina kurasikirwa nekusasarura chero nguva.
Iyo edhisheni timu yeActualidad iPhone inoumbwa neboka re iPhone nyanzvi of Apple.
Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu cheiyo Rechokwadiidad iPhone timu, zadza fomu iri
Bachelor yeMishonga uye Chiremba wevana nekudana. Apple mushandisi kubva 2005, pandakatenga yangu yekutanga iPod nano. Kubva ipapo, ese marudzi e iPhone, iPad, Mac, AirPod, Apple Watch yapfuura nemaoko angu ... Nesarudzo kana kudikanwa, ndanga ndichidzidza zvese zvandinoziva zvichibva pamaawa ekuverenga, kutarisa nekuteerera kune ese marudzi ezvinyorwa zvine hukama. neApple, ndosaka ndichifarira kugovana zvandinowana pablog, pane YouTube chiteshi uye paPodcast.
Mhoro! Ndakatanga muApple nyika nePod Shuffle, zvese zvaive zvakanaka, mukana wekushamisa iwe nenziyo dzisingaite iwe dzawaisanganisira muTunes playlist. Zvino kwakauya iPod Nano, iPod Classic, uye iyo iPhone 4 ... Inotemerwa neiyo Cupertino ecosystem ini ndakawana niche yangu muActualidad iPad, mushure meizvi takaita kusvetuka kuActualidad iPhone nechikwata chikuru chandinogovana nacho "geek "ya Cupertino, uye wandinoramba ndichidzidza naye mazuva ese. Dzinga? Hongu, asi neApple gadget 😉
Ini ndinoda zvigadzirwa zvemagetsi, uye kunyanya izvo zveiyo Apple brand. Kupenga kwangu kukuru kuri kuteerera kumarudzi ese emumhanzi pane yangu iPhone, nekuda kwehunhu hwayo hweruzha, kunyangwe ini ndichifarira kuyedza akasiyana maapplication anogona kuve anobatsira pane imwe nguva.
Architect uye geek, anofarira internet, matekinoroji matsva uye iyo Apple nyika. Ini ndinogara ndichinyora uye kudzidza nezve shanduko yeiyo iPhone uye zvese zvine chekuita neichi chiratidzo, izvo zvandiri kugara ndichinyora.
Apple tekinoroji anoda uyo anotsvaga kugovana ruzivo uye kudzidza kubva kune vamwe. Ini ndinoedza kuisa kuda mune zvese zvandinoita, saka ndinovimba kuti kuraira kwangu kuchakubatsira iwe kugadzirisa ruzivo rwako ne iPhone yako.
Parizvino ndakazvipira kune blogger yenyika uye kurongeka kwezviitiko. Ini ndinoda Internet, uyezve zvese zvine chekuita neApple. Ini ndinonakidzwa nekudzidza nyowani nyowani dze iPhone saka ndinotarisira kuburitsa zvese zvidobi zvaungawana pane yako smartphone.
Nguva dzose unoda kudzidza uye kudzidzisa. Ini ndinoda kumhan'arira pane zvese zvandinoziva, uye izvi, zvakawedzerwa kuchinhu chekuti ini ndinogara ndichienderana ne iPhone, zvinondibatsira kutaura zviri nani nhau dzeichi chiratidzo.
Kuda kwangu tekinoroji kwakazvarwa neApple uye kunotora midzi mandiri makore mashoma apfuura uye ikozvino handikwanise kurega kudzidza uye kuda zvimwe. Neichi chikonzero, ini ndinonyora kuzivisa nezve yakanakisa nhau dze iPhone uye nezvimwe zvishandiso zveiyo mhando neruzivo rwangu uye neruzivo.
Computer sainzi, mushandisi weIOS kubva payakatanga uye mushandisi weMac kweanopfuura makore mashanu. Ndinoda kufamba, asi nguva dzose ne iPhone yangu kuti nditaure nenzira yakaoma zvikuru, uye kutora mifananidzo yakanakisisa inogona kutorwa ne-smartphone.
Anoda matekinoroji matsva, uye mushandisi weIOS uye OSX. Ehezve, ini ndiri shasha yeApple, ndosaka ndichinyora mumagazini ino kuitira kuti vaverengi vazive nezve yakanakisa iPhone nhau.
Kunyora nePhones zviri zviviri zvandaifarira. Uye kubvira 2005 ndine rombo rakanaka rekuvasanganisa. Zvakanakisisa pane zvese? Ini ndinoramba ndichinakidzwa sezuva rekutanga kutaura nezve chero chinhu chitsva chinounzwa naApple kumusika wefoni dzefoni
Ndiri mukomana anoda Apple nyika. Ini ndinoda kudzidza sekureba sezvazviri zvemisoro yandinoda kana kukosha. Naizvozvo, muzvinyorwa zvangu iwe unowana zvinhu zvichabatsira muzuva rako zuva nezuva ne iPhone yako.
Mutori venhau anodakarira zvemagetsi uye nhare mbozha. Ini ndinogara ndichigara ndichiziva nezve iPhone, iPad, Apple Watch uye MacBook Pro, saka chinangwa changu ndechekuti vese vaverengi vazive nhau.